Usule isigubhukana uZinedine Zidane kuReal Madrid - Bayede News
Usule isigubhukana uZinedine Zidane kuReal Madrid
Isithombe: nguCharles Platiau/Reuters
Obengumqeqeshi wezikhondlakhondla zaseSpain iReal Madrid uZinedine Zidane, udalula okuyikho okumenze wesula njengomqeqeshi kuleli qembu.
UZidane encwadini ayibhalile uthe ubone ukuthi leli qembu alisakholelwa kuyena, ingakho encamele ukuthi esule. Usula nje besekuvele kukhona ukukhuluma okuthi kungenzeka leli qembu limkhombe indlela.
IReal Madrid kuligi yaseSpain iSapanish La Liga iphume endaweni yesibili ilandela omkhaya bayo i-Atletico Madrid kanti kumqhudelwano i-UEFA Champions League yaphuma kuSemi-final.
“Ngisule kuleli qembu ngoba nginomuzwa wokuthi ikilabhu ayisenakho ukungethemba engikudingayo, futhi ayisanginiki uxhaso engilundingayo njengomqeqeshi ukuze ngizokwazi ukwakha iqembu eliqinile elizoba khona isikhathi eside. Ngingumuntu owazalwa ewumnqobi bengize kuleli qembu ukuzonqoba izindebe, lokhu ngikubona kungeke kusenzeka ngendlela okuyiyona. Konke lokhu ngikubona kukhona abantu abathize abakuphehlayo,” kusho uZidane.
Akukhona okokuqala uZidane esula kuleli njengoba akwenza ngonyaka wezi-2018, ukwenza lokho nje wamangaza abaningi kwazise wayesize leli qembu ekutheni linqobe i-UEFA Champions League kathathu kulandelana. Emveni kwesikhathi esincane wabuya kuleli qembu emva kokuthi seliqashe uJulen Lopetegui noSantiago Solari kodwa behluleka.
“Kodwa konke engikwakhile nsuku zonke kuleli qembu ngikubona sekukhohlakele. Engingakusho nje ukuthi ukushiya kwami kuleli qembu akusho ukuthi sengiwehlile umkhumbi wokuqeqesha, angikakhathali ukuqeqesha, ngisazoqeqesha.
“Ngifuna ukuthi konke esesikuzuzile ndawonye kuhlonishwe. Ngangifisa ukuthi ezinyangeni ezedlule ubudlelwano bami neqembu kanye noMengameli (uFlorentino Perez) behluke kancane kwabanye abaqeqeshi. Ngicabanga ukuthi kuningi engikwenzele leli qembu,” kusho uZidane.
Inkontileka kaZidane neReal bekufanele iphele ngonyaka wezi-2022 kodwa ubelokhu enqaba kaningi ukuqinisekisa ukuthi usazoba kule kilabhu ngesizini ezayo.
Unomlando wokwenza izimemezelo ezimangazayo njengomdlali, uqale wamemezela ukuthatha umhlalaphansi ebholeni lamazwe omhlaba ngonyaka wezi-2004 waphinde wakhuza ibuya ngonyaka wezi-2006 nalapho kwakuwunyaka weNdebe yoMhlaba, emveni kwalokho waphinde wathatha umhlalaphansi kulandela ukuthola ikhadi elibovu ngokushaya uMarco Materazzi ngekhanda esifubeni.
“Ukuchitha iminyaka engama-20 eMadrid kube yinto enhle kunazo zonke ezake zenzeka kimi empilweni futhi ngiyazi ukuthi ngikweleta kuphela uPerez owangigcina eqenjini lakhe,” kusho uZidane kule ncwadi.
Izoba yisixazululo nesibusiso iMDC ebholeni kuleli
Enezela uthe: “Ngikusho lokhu nje kusuka enhliziyweni, ngiyohlale ngimbonga uMengameli weqembu.”
UZidane manje umataniswa neqembu lezwe laseFrance noma lase-Italy iJuventus FC adlala kuyona iminyaka emihlanu.
nguSabelo Maphumulo Jun 4, 2021